Barlamaanka Sweden oo Ansixiyay Miisaaniyada Mucaaradka, Guuldarradii ugu Horeysay ee Raisal Wasaaraha Cusub
HomeWararka Maanta SomaliskaBarlamaanka Sweden oo Ansixiyay Miisaaniyada Mucaaradka, Guuldarradii ugu Horeysay ee Raisal Wasaaraha Cusub
November 25, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Baarlamaanka Sweden ayaa u codeeyay ansixinta miisaaniyada garabka midig ee mucaaradka oo ay soo bandhigeen xisbiyada Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) iyo Sverigedemokraterna (SD).
Ra’iisul Wasaaraha la doortay ee Magdalena Andersson ayaa heshay guul daradii ugu horeysay, saacado uun ka dib markii Baarlamaanka uu ansixiyay in ay noqoto Ra’iisal Wasaarihii 34-aad, si ay u noqoto haweeneydii ugu horeysay ee madax ka noqota dalka taariikhda.
miisaaniyadda waxaa soo bandhigay saddexda mucaarad ee garabka midig dhinacyada kuwaasi oo kaga guuleestay Codadka.
Andershon ayaa shir jaraa’id oo ay qabatay doorashada ka dib ayaa ku dhawaaqday in ay Sweden xukumi karto xitaa haddii miisaaniyada mucaaradka garabka midig ay ku guuleysato inta badan codadka baarlamaanka .
Taas macneheedu ayaaah in xukuumaddu ay fulin doonto miisaaniyada mucaaradka. Dhanka kale, mawqifka xisbiga deegaanka oo ah saaxiibka xukuumadda ayaan u muuqan mid kasoo horjeeda atlrintan iyagoo durba ka baxay Dowlada.